Tuubada Nordstream oo la filayo in la diido - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bidix: Björn Jansson (S), hoggaanka gobolka Gotland, Per-Ola Mattsson (S), guddoomiyaha degmada Karlshamn, Wasiirka difaaca Peter Hultqvist (S), wasiirka arrimmaha dibadda Margot Wallström (S) oo si wada-jir ah u qabtay shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda arrimmaha dibadda. sawir: Janerik Henriksson/TT
Tuubada Nordstream oo la filayo in la diido
Go'aanka kireeynta dekedda Slite oo maya ku socota
La cusbooneeyay onsdag 14 december 2016 kl 17.08
La daabacay onsdag 14 december 2016 kl 14.04
Guddiga teknikada ayaa la filayaa inuu maya ugu codeeyo codsigii kireeynta dekedda Slite ay ka dalbatay shirkadda Nordstream 2 maalinta berito ah go’aan uu guddigu amuurtaa ka gaari doono.
Guddoomiyaha guddiga teknikada Tommy Gardell, S, ayaa maanta oo arbaca ah ka gaabsaday inuu ka faaloodo codsiga in dekedda Slite laga kireeyo Nordstream 2 iyo go’aanka ey ka qaadan doonaan.
Haddii uu gobolka Gotland ka kireeyo dekedda Slite, shirkadda Nordstream 2 waxay caqabad ku noqon doontaa howlaha difaaca ee dalka Sweden, sida uu sheegay wasiirka difaaca Sweden Peter Hultqvist (S) mar ey kulan wada yeesheen hoggaamiyaha gobolka Gotland, Björn Jansson (S).
– Wasiirka ayuu hadalkiisu caddaa iyo inuu ka walaac-san yahay in gobolka Gotland uu ka kireeyo shirkadda Nordstrean dekedda Slite. Go’aanka dawladda ayaa salka ku haya midka wasaaradda difaaca, waana mid qiime ku fadhiya, sida uu xaqiijiyay Björn Jansson.
Miyaanay ahayn mid ay adag tahay in laga hor-yimaado hadallo sidaa u cadcad?
– Xaqiiqdii haa. Waa wax cad sida arrinkaa loo arko. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in la caddeeyo in kubbaddu iminka ku noqon doonto dhanka gobolka Gotland. Annaga ayaana go’aanka kama dambeeysta ah iska leh.
Wasiir Peter Hultqvist, warkaagu wuu caddaa iyo in deked laga kireeyo Nordstream 2 ay tahay mid halis ku ah howlaha difaaca dalka Sweden. Hadal kaa ka cad lama oran karo aan ka ahayn in si caddaan ah loo yiraahdo maya?
– Haa, waxaannu sheegnay sida ay wax noola muuqdaan waana fikir aannu la qaybsanayno wasaaradda difaaca, intaa wax dhaafsii-san looma baahna inaan dib ugu noqdo. Sidaasoo ay tahay waxaan xushmad u hayaa nidaamka is-xukunka degmooyinka iyo sida xeerku u yaallo anniguna waxaan u hadlay xaqa uu wasiirku u leeyahay ee xeerka taabac-san ee ammuurtan la xiriirta.
Laakiin maamulka gobolka Gotland way ku adkaanaysaa inuu ka hor-yimaado marka ereyadaada cadcad la dhageeysto.
– Haa, Xushmad ballaaran ayaan u hayaa Björn Jansson dood wanaag-sanna waannu yeelanney. Waxaannu sidoo kale dib u kulmi doonnaa xilliga kala wareegga sannadka oo aannu halkaa ka sii wadan doonnaa, sida uu sheegay Peter Hultqvist.
Waxaad sidoo kale carabaabtay inaad wada-hadal ku sii wada geli doontaan in dawladdu gobolka ka caawiyi doonto dhanka hor-u-marka. Ma laga yaabaa in dawladdu ku soo jiidanayso sidii uu gobolku maya u oran lahaa kireeynta dekedda?
– Middani waxay ka mid ahayd doodihii guud ee aannu ka wada xaajooneyney, hase yeeshee waxa ey ka dhigan yihiin iyo natiijada ka soo baxda dib ayaannu idin kala soo socod-siin doonnaa.
Björn Jansson, guddoomiyaha gobolka Gotland ayaa dul-mar ku sameeyey dhammaan wada-hadalladii:
– Maamulka gobolku wuxuu isu ballan-san yahay arbacada arrmmahan ayaan uga warrammi doonaa, dabadeed guddiga teknikada oo isagu go’aan ka gaari doona khamiista. Aan bal ka war dhoowrno wixii ka soo baxa.
Ma ahan wax aan suurtagal ahayn in dib loo dhigo haddii wakhti dheeri ah loo baahdo. Bal aan aragno. Waa inaan ka fekero oo aan ku seexdo sidii aan ka yeeli lahayn. Madaama aanay su’aashani ahayn mid weli dhammaatay. Doodo ayay kollay ka dhex abuuri doontaa siyaasiyiinta nawaaxiga, sida uu sheegay Björn Jansson, guddoomiyaha gobolak Gotland.
Kulan laga yeelanayo ka kireynta dekadaha mashruuca Nord Stream 2